NY FANAHY FAHA-7, ZANAHARY NA AURA ATMIQUE · L'Homme, son aura et son évolution
> NY FANAHY FAHA-7, ZANAHARY NA AURA ATMIQUE
Classé dans : — cyrius @ 12:31
Zanahary, Andriamanitra, Adonai, Adama, Jehovah, Yahweh na Iaveh, Eva, Hova, Rahova,
Fa Za (izaho) -Nahary tokoa no dikan’ny hoe Zanahary ; Fantatrao koa ve, fa ny teny hoe Andriamanitra anie ka teny sanskrity roa natambatra : Adi sy Mantra ; Adi, na Adonaï, na Adama, Razamben’ny olombelona ; anaran’i Eva ity Jehovah na iaveh antsoina ao amin’ny baiboly sy ny fivavahana ity. El kosa, Olo na olona, ilay, ny fanahy no El na olona.
Anaran’Andriamanitra ao amin’ny baiboly koa io, El Adonaï